Nezvedu - Jiangxi FuluoEr Medical Instruments Co., Ltd.
JiangXi Folohr Medical Instruments Co., Ltd. (Flor Medical kwenguva pfupi) yakavambwa muna 2012.JiangXi Folohr Medical Instruments Co., Ltd. yanga ichitarisa paR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvirwere zvechirwere zvisingaperi kubvira pakagadzwa muna 2012; Kubva pane hwaro hwekugadzira muNanchang, kambani yakasimbisa Nanchang R&D pakati uye yakasimbisa matavi muBeijing, Shanghai, Chengdu, nezvimwe.
Iyo kambani inotungamirwa muXiaolan Economic Development Zone, Nanchang City. Iyo yakashanda zviri pamutemo muna 2012. Icho chigadzirwa chekurapa chigadzirwa chinosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa. Yayo bhizinesi network inovhara nyika yese, uye
Uye kuendeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi matatu nenzvimbo dzakaita seUnited States, Britain, France, Germany, Russia, Japan, neSouth Korea.
Chiratidzo pakutanga kwekambani chaisanganisira kuve yepamusorosoro indasitiri boka rine ruzivo rwesainzi uye kugona kugona. Boka rakavhura akawanda akakosha zvikamu senge shuga yeropa, BP, tembiricha yemuviri, uye okisijeni atomization. Flor inotungamirwa muNanchang. Parizvino, yakagadza nzvimbo yekutsvagisa nekusimudzira muNanchang, uye zvakateerana zvakagadzira huwandu hwevamiriri vezvokurapa zvigadzirwa.
Kuchengetedza hutano hwemhuri yedu ndicho chinangwa chekutanga chebhizinesi redu, uye kubatsira nzanga uye kushandira vanhu ndicho chinangwa chedu bhizinesi.
Unyanzvi, kungwarira, hunyanzvi, uye kugadzirisa ndidzo pfungwa dzebasa idzo Flor agara achitevedzera. kambani yedu ichagara inoteedzera kune hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, inotarisisa kutsvagisa kwechigadzirwa uye kusimudzira, inosimbisa kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, uye nekupa masevhisi emhando yepamusoro seyambiro yekudzivirira hutano hwevanhu.